Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! | สาขา Aarsaa Kakuu กับกระทรวงบัญญัติใหม่
← Nuyi Waaqayyoof ใน hojjenna
Jalqaba Jecha มานะ duree jedhu เป็นเรื่อง yoo เป็น irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha มานะ jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan เกี่ยวกับ ISAAA เป็น jijjirama.
มานะ qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun บู่ชาติ ka'amu yookin ในคอลัมน์ในคอลัมน์ jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliin ni hubbana. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Haa ta’u malee Waaqayyo akka isaatti qulqulluu akka tanu yeroo hundumaa ni barbaada. Kanaaf akka ani qulqulluu ta’e isinis qulqulloota ta’a jedhe kan nu abboomeef.
Kanaaf Waaqayyo akkas nun jedhe: Ani isin bira nan buufadha, isin jiddus nan deddeebi’a, แม้ Waaqayyo keessan จัดส่งเครื่องหมายบริการ Ta'a วันนี้ taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana hafuurri Waaqayyo keessa boqatu kana qulqulluummaati ni eegnaa ree?
Hafuurri Waaqayyo yoo dhuguma ISIN keessa jiraate, มาลี hafuuraatti akka akka ISIN feedha fedha foonitti jiratan เวลา; namni hafuura Kristos ของราคา keessaa qabne ชาติ Kristos miti (กรุงโรม 8:9). Garu ISIN นี้ akka ไม่ qulqulluummaa Waaqayyo taatan, hafuurri Waaqayyoos akka isin keessa buufatee jiru hin beektanii ree? (1Qor. 3:16).
Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 ความเห็น
Addisuu Baqqalaa บน กรกฎาคม 18, 2015 ที่ 10:15 ที่ กล่าวว่า:
deriba fufa บน พฤษภาคม 10, 2015 ที่ 6:44 ที่ กล่าวว่า:
deriba fufa บน พฤษภาคม 10, 2015 ที่ 6:38 ที่ กล่าวว่า:
Bultuma Itana บน มีนาคม 12, 2015 ที่ 5:39 ที่ กล่าวว่า: